Mamoaka e-commerce miaraka amin'i Zmags Verge ny famoahana nomerika
Alarobia, Septambra 5, 2012 Alakamisy, Septambra 6, 2012 Douglas Karr
ny Ecommerce Mpanohana, Zmags, dia namoaka mpijery nomerika vaovao. saika ™ mamela ny orinasa hanova ny PDFs (sy ny atiny hafa) ho mpijery iray ahafahan'izy ireo mametaka angona, sary, horonan-tsary, ary na dia ny sehatra ecommerce aza. Ny mpijery dia azo apetraka amin'ny birao, finday ary takelaka amin'ny alàlan'ny sehatra fitantanana tsotra.
Tena fandrosoana amin'ny famoahana nomerika izany, ahafahan'ny orinasa manangana traikefa mifanerasera sy mahasarika izay ahafahan'izy ireo mivarotra mivantana. Taloha, orinasa iray dia afaka mizara ny magazine na bokikely fa tsy maintsy miantehitra amin'ny mpamaky hiverina amin'ny magazay an-tserasera hanao ny fividianana. Ity interface vaovao ity dia ahafahan'ny orinasa mampiditra toerana mafana ho an'ny mividy fampahalalana ary mamela azy ireo hametaka vokatra maromaro miaraka aza.
Avy amin'ny Zmags Pejy vokatra verge
Ireo pejy manankarena atiny sy sary mavitrika dia azo zahana amin'ny fomba mahaliana, zaraina ary amin'ny paompy haingana na tsindrio mifindra ao a harona fiantsenana, rehetra tsy mila famerenana pejy na famelombelona.
Manatsara ny traikefan'ny mpampiasa manerana ny sehatra rehetra hanararaotra feno ny fampiasa iPad HTML5, ary koa ny finday avo lenta, solosaina finday na solosaina finday; azo apetraka eo amin'ny pejin'ny marika Facebook mihitsy aza.
Zmags manokana Tadiavo ny look mampitombo ny vola miditra amin'ny alàlan'ny famelana ny mpiantsena hijery ny entana rehetra ao aminy ny fampiasa fananganana vokatra, ary mijery sy mividy entana tsirairay na miaraka.
Ary ity ny bokikely vokatra Verge - ao amin'ny mpijery. Aza hadino ny manindry ny bokotra havia ambony mba hahitana ny efijery feno!
Tags: fanontana nomerikaecommerceonline shoppingPDFfitantanana pdf
Atiny 4.0 Avy amin'ny mahatalanjona ka hatramin'ny maro